Maka: ukwakha iqela
NgeCawa, Oktobha 25, 2009 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2016 UAdam Omncinci
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ndiwele kumkhwa ombi wokubeka ii-imeyile ecaleni ukuze zenze inyanga okanye nangaphezulu. Ndinenkqubo yokuhombisa ii-imeyile ezingenayo. Ukuba abayifuni ingqwalaselo yangoko kwangoko okanye isenzo kwithuba lexesha ukunqanda iintlungu zohlobo oluthile, ndibanike bahlale. Mhlawumbi ayonto imbi leyo. Okanye mhlawumbi akunjalo. Yonke le ngxoxo indenze ndacinga nomhlobo wam (ixhoba lam "lokulinda")
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Lixesha lokugqibela lokuba uphinde uyibhale kwakhona inkqubo yakho ye-imeyile ukuqinisekisa ukuba uluhlu lwakho lwe-imeyile luhlulwe ngokufanelekileyo kwaye ababhalisi bafumana ulwazi abalufunayo? Uninzi lwabathengisi luqwalasele kuphela ukubala okukhulu kwababhalisi… izintlu ezincinci ze-imeyile kunye nomxholo ekujoliswe kuwo uhlala ungaphaya kwimithombo yeendaba. Nantsi iimeyile yolondolozo egqibeleleyo, efunyenwe kwiWebTrends: Izihloko zahlulwe kakuhle kwaye nokuhlaziywa kokukhethwa kwam bekucofa kanye. Ukuba ungabamba ukhetho lwababhalisi
Kutheni uthetha nam?
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Impendulo ekujoliswe kuyo endinqwenela ukuba ndinokuyishiya kuko konke ukuzibandakanya okungafunekiyo endikufumana nge-imeyile, uthungelwano lwasentlalweni kunye neebhloko ezincinci: Andikwazi. Ngokukrakra. Kutheni uthetha nam? Ingaba Undifumene njani? Ndikunikile imvume yam? Ndikuxelele ukuba ndinomdla kwimveliso okanye kwinkonzo yakho? Ngaba uthetha nam kuba bekunyanzelekile? Nangona kungekho nto inokuchaphazela? Ngaba uyazi ukuba ngubani
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Yandisa iziphumo zakho ze-imeyile ngokuthembekileyo nangokufanelekileyo ngeNtengiso ye-imeyili ka-2009 ye-Marketing Bechmark. Amashishini afuna iindlela ezifanelekileyo zokunyusa ifuthe kunye nokwakha ubudlelwane kwinto enokuba yinto enzima kuqoqosho lwehlabathi. Kwaye i-imeyile iyaqhubeka njengenye yeendlela ezisetyenzisiweyo nezihlukunyezwayo abathengisi abajikela kuzo ekunxibelelaneni nesiseko sabathengi. Kodwa kuphela kwendlela yokwandisa ukusebenza kwe-imeyile kukuthengisa ngokuthembekileyo nangokufanelekileyo.
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 19, 2008 NgoMgqibelo, ngo-Epreli 19, 2008 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Bakhe iBarnes kunye neNobles ngaphakathi kweemayile ezimbalwa zekhaya lam kwaye ivenkile emangalisayo. Kubonakala ngathi ndisoloko ndinengxaki yokufumana iincwadi zam phaya, nangona kunjalo. Imida ibonakala ineendlela ezinqabileyo zokucwangcisa iishelufa zazo. Ngapha koko, ndiyazonwabela zombini iivenkile kodwa ndizifumene eBarnes naseNobles rhoqo kuba bane-Starbucks ene-Wireless ene-AT & T. Khange ndiye